चौतारा र मेलम्चीको बजेट रू. २ अर्ब १८ करोड
स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र पर्यटनमा विशेष जोड
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी र मेलम्ची नगरपालिकाले बुधवार आ–आफ्नो नगरसभामा रू. २ अर्ब १८ करोड ७० लाख भन्दा बढीको वार्षिक अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेका छन् । दुईओटै नगरले स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार तथा पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, नगर गौरवका आयोजना र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बुधवार सम्पन्न आठौं नगरसभाबाट नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि रू. १ अर्ब ५ करोड २३ लाख ८९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ ।
नगरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रू. २ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा रू. २ करोड ५० लाख, नगर गौरवको योेजनामा रू. २ करोड र शिक्षा क्षेत्रका लागि रू. १ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै लक्षित वर्गका लागि रू. १ करोड ५० लाख, पशु विकासका लागि रू. १ करोड र रोजगारी सृजनामा रू. १ करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी नगरभित्रका १४ ओटा वडाका लागि रू. ७५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ । यो वर्ष नगरपालिकाले युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, पर्यटन, लघु उद्यम, सडक, सहकारी, न्यायिक समितिमासमेत उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्षको बजेट विशेषतः कोरोना नियन्त्रण तथा प्रभाव न्यूनीकरणमा केन्द्रित गरिएको नगर उपप्रमुख जानुका पराजुलीले बताइन् । त्यसका लागि नगरबासीलाई मालपोत करमा पूर्ण छुट प्रदान गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित अनुमानित बजेट आउँदो असार २६ गते हुने नगरपरिषद्ले आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
मेलम्चीको बजेट स्वास्थ्यमा मात्रै रू. १३ करोड
मेलम्ची नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू. १३ करोड भन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि मात्रै नगरपालिकाले रू. ५ करोड १० लाख र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमका लागि रू. ८ करोड ८४ लाख विनियोजन गरेको हो ।
मेलम्चीले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कुल रू. १ अर्ब १३ करोड ३७ लाख २६ हजार ४५८ को बजेट विनियोजन गरेको छ । मेलम्चीले स्वास्थ्य, कृषि पर्यटन, पूर्वाधार तथा किसानलक्षित कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ ।
युवालक्षित कार्यक्रम अनुरूप गाउँमै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्दै कोभिड–१९ का कारण बेरोजगार बनेकाहरूका लागि आवश्यक शीप, तालीम र अनुदानको व्यवस्था गरी कृषि पेशामा संलग्न गराइने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यस्तै संक्रामक रोग, प्रकोप र विपद्बाट जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउने, विकास गतिलाई तीव्रता दिने, नागरिकका मौलिक हक, अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, पूर्वाधार विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको नगरपालिकाले बताएको छ ।